भारतमा तहल्का मचाउदै नेपाली चेलि ! साबित्रा एक्लैले ठोकिन् ५ गोल - News20 Media
January 28, 2020 January 28, 2020 N20LeaveaComment on भारतमा तहल्का मचाउदै नेपाली चेलि ! साबित्रा एक्लैले ठोकिन् ५ गोल
काठमाडौं, माघ १४ : नेपाली राष्ट्रिय टोलीकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी (साम्बा) को ५ गोलको मद्दतमा इन्डियन वुमन लिग (आइलिग) मा गोकुलम केरला एफसीले क्रेन्क्रे एफसी मुम्बइमाथि सानदार जित निकालेको छ।
मंगलबार आफ्नो दोस्रो खेल खेलेको गोकुलमले केन्क्रे एफसीलाई १०–१ को फराकिलो हरायो। बेङलारु रंगशाला भएको खेलको सातौ मिनेटमा सावित्राले पहिलो गोल गरिन्। १९ औँ मिनेटमा दोश्रो गोल थपिन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा ह्रयाट्रिक पूरा गरिन्। ४८ औँ मिनेटमा चौथो र ६१ औँ मिनेटमा पाँचौ गोल गरिन्।
केन्क्रेविरुद्ध खेलको तेश्रो मिनेटमा नै गोकुलमले अग्रता बनाएको थियो। सावित्राको प्रहार रिवाउन्ड भएपछि पाएको अवसरमा करिश्माले पहिलो गोल गरेकी थिइन्। १८ औँ मिनेटमा करिश्माले व्यक्तिगत दोश्रो गोल गरिन्। २०औँ मिनेटमा मनिषाले गोल थपिन्। ३१औँ मिनेटमा ग्रेसले टिमका लागी छैटौ गोल गरिन्। ३५औँ मिनेटमा क्रेन्क्रेकी कप्तान सोम्याले गोल फर्काएर अग्रता कम बनाइन्। ५२औँ मिनेटमा करिश्माले ह्रयाट्रिक पुरा गरिन्। ५ गोल गरेकी सावित्रा वुमन अफ दि म्याच चुनिइन्। प्रतियोगिताको २ खेलमा सावित्राको गोल संख्या ६ पुगेको छ।
यसअघि पहिलो खेलमा श्रीभुमीविरुद्ध निर्णायक गोल गरेकी थिइन्। लिगमा अहिले नेपाली टिमकी मिडफिल्डर अनिता बस्नेत सम्मिलित सेथु एफसीले कृप्सा एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अघिल्लो सिजनमा सावित्रा र अनिता दुवै जनाले सेथुबाट खेलेका थिए। सावित्रा यस सिजनमा ७ नम्बर जर्सीमा मैदान देखा परेकी छन्। अनितालाई सेथुले ११ नम्बर जर्सी दिएको छ।
निक किर्गियोगलाई स्तब्ध बनाउँदै राफाइल नाडाल अस्ट्रेलिया ओपन क्वार्टरफाइनलमा पुगेसँगै रोजर फेडेररको कीर्तिमानी ग्रान्ड स्लाम उपाधिलाई बराबरी गर्ने लक्ष्य जारी राखेका छन्। गत वर्ष आफूमाथि निकै आलोचना गरेका अस्ट्रेलियन प्रतिद्वन्द्वी निकलाई हराउँदै स्पेनिस स्टार नाडालले अन्तिम आठमा स्थान बनाएका हुन्। निकै प्रतिस्पर्धा बनेको खेलमा विश्व नम्बर एकसमेत रहेका नाडालले निकलाई ६–३, ३–६, ७–६(८÷६) र ७–६(७÷४) ले पराजित गरे।
डोमिनिक गत दुई संस्करणको फ्रेन्च ओपनको फाइनलमा नाडालसँगै स्तब्ध भएका थिए। यस पटक क्ले कोर्टका बादशाह नाडाल रोजर फेडेररको २०औं ग्रान्ड स्लाम कीर्तिमानलाई बराबर गर्ने लक्ष्यमा छन्। नाडाल क्वार्टरफाइनल पुगेसँगै पुरुषतर्पm क्वार्टरफाइनल समीकरण पूरा भएको थियो। त्यसअघि स्विस स्टार स्टान वावरिंकाले विश्व नम्बर पाँच ड्यानिल मेदभेदेभलाई ६–२,२–६, ७–६(७–२) र ६–२ ले हराए। वावरिंकाले क्वार्टरफाइनलमा जर्मनीका एलेक्जेन्डर जेरेभविरुद्ध खेल्नेछन्। जेरेभले भने आन्द्रे रुब्लेभलाई ६–४, ६–४ र ६–४ ले हराएका थिए।
पुरुषतर्पm अर्को क्वार्टरफाइनलमा रोजर फेडेररले टेनिज सान्डग्रेन तथा नोभाक जोकोभिचले मिलोस राओनिकविरुद्ध खेल्नेछन्। महिलातर्पmका क्वार्टरफाइनलमा अस्ट्रेलियाका एस्लेघ बार्टी र चेक रिपब्लिककी पेत्रा केभितोभा, अमेरिकाकी सोफिया केनिन र ट्युनिसियाकी ओन्स जाबेउर, रोमानियाकी सिमोना हालेफ र इस्टोनियाका एनेट कोन्टाभेइट तथा स्पेनकी गार्बिन मुगुरुजा र रसियाकी एनास्टासिया पाब्ल्युचेनकोभाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
January 23, 2020 N20